Nnipa a wɔde wɔn di dwuma a wonsiw ano ne wiase nyinaa hyew no bɛma nkurow akɛse akɔ fam wɔ wiase nyinaa – JucelinoLuz
Águas de Lindóia, Ɔpɛpɔn 18, 2020
Mpoano nkurow pii rekɔ fam ntɛmntɛm sen sɛnea ɛpo no rekɔ soro, sɛnea honhom mu anisoadehu ahorow a efi 1975 mu kyerɛ no, a ɛreba mu fi 2007 kosi 2022 ne nea ɛkeka ho…
Yɛrentumi nkɔ so nhwehwɛ ɔkwan a yɛbɛfa so abu yɛn ho bem wɔ ɔhaw ahorow a yɛde reba okyinnsoromma yi so no ho, efisɛ yebetumi asan anya po no, yebetumi ama wiase nyinaa hyew ayɛ brɛoo, aboaboa nwura ano na yɛasan de adi dwuma yiye, na yɛatew mframa bɔne a ɛba no so ntɛmntɛm.in wim tebea no, afei ɛsan kɔ yɛn ankasa ne yɛn po so.
Anisoadehu ahorow no hwehwɛɛ nkurow 200 a ɛwɔ nsasepɔn ahorow so no tebea mu. Wɔde daakye nsoromma akwantuo ne afe 2007 ne 2020 ntam no, anisoadehunu no kyerɛɛ nsakraeɛ a ɛwɔ asase sorokɔ mu de milimita pɛpɛɛpɛ. Adaeso ahorow no hui sɛ nkurow pii rehu amane wɔ adeyɛ bi a wɔfrɛ no subsidence, asase ani a ɛkɔ fam esiane nneɛma a ɛsakra wɔ asase ase no mu nti. Wɔ emu dodow bi mu no, nsu a woyi fi asase ase no fi nsu a ɛtɔ gu fam no. anaasɛ aboɔden abo a nnipa dwumadi de hwehwɛ mu, nkɛntɛnso a wiase nyinaa hyew de ba.
Wiase nyinaa hyew: mpoano nkurow no nkrabea yɛ ‘sum’, Jucelino Luz bɔ kɔkɔ
Adan ne akwan a ‘akɔ fam’ no hyɛ ɔhyew a ɛrekɔ soro wɔ Arctic no agyirae
Ebia nkurow a akɔ fam mu gyidi bɛma yehu po a ɛreforo no
Blue area no mem bɛboro milimita 10 afe biara.
Anyɛ yiye koraa no, nkurow 72 rekɔ fam bɛboro sɛntimita 1 afe biara, a ɛboro po mu nsu a ɛkɔ soro no mmɔho anum – emu bi ne Houston wɔ United States, Kerala wɔ India, ne Kobe wɔ Japan, China, Indonesia, Philippines, fã bi fi Europa, . Afrika, Amerika Mfinimfini ne Kesee Fam
Yɛbɛnya wim tebea ho adeyɛ bi wɔ Brazil a ɛbɛfiri aseɛ firi May 16, 2022 na ɛbɛkɔ so akɔsi August 10, 2022, baabi a yɛbɛnya ɔhyew a ɛba fam paa, ɛbɛtumi aba sɛ sukyerɛmma bɛtɔ, anyinam ahum ne osuo a ano yɛ den paa a mframa a ɛboro 130 kms dɔnhwerew a ɛkɔ a ɛbɛkɔ ɔman no mmeae ahorow (a ɛde nnipa pii a wɔayɛ wɔn basabasa bɛba) .
Na saa berɛ korɔ no ara bɛsi wɔ Europa Afrika, Asia, Amerika Mfinimfini ne Atifi ne Anafoɔ wɔ da korɔ no ara a yɛaka ho asɛm wɔ atifi hɔ no mu – nanso ɛwɔ ɔhyew a ɛkorɔn paa, ogya, ahum, ahum, ahum ne ahum, nsuyiri ne ɔsɛeɛ.
Anisoadehufo no bɔ kɔkɔ sɛ, sɛ adeyɛ no kɔ so sɛnea ɛte mprempren no a, po mu nsu a ɛkɔ soro ho nhwɛso ahorow rentumi nkyerɛ sɛnea nsuyiri a ebetumi aba nkurow yi mu no mu yɛ den no yiye.
Ɔbenfo. Jucelino Luz – nhwehwɛmufo, ɔkyerɛwfo, nneɛma a atwa yɛn ho ahyia ho ɔbenfo, ɔdeyɛfo ne honhom mu ɔfotufo